(In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2) - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » (In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2)
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2) (In-သင်တန်း)
ရာထူး: (In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2)
လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ခြင်းကျနော်တို့ဂေဟဗေဒမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကခြားနားချက်ရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အလွန်ထိရောက်သောကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်, လူတွေ၏တန်ဖိုးကူးပြောင်းကြောင်းခေါင်းဆောင်မှုရှိပါတယ်, နှင့်ပျော်စရာအချက်ယုံကြည်သော, ဂေဟဗေဒအကောင်းတစ်လျောက်ပတ်သည်။
အဆိုပါစွန့်ပစ်2အရင်းအမြစ်များ (W2R) အစီအစဉ်တခု Facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2) (In-သင်တန်း) အနေအထားဖြည့်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ဒီအနေအထား Lacey, WA ၌အကြှနျုပျတို့၏ဌာနချုပ်အဆောက်အဦး (HQ) တွင်တည်ရှိသောလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Facility အင်ဂျင်နီယာချုပ်အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာလေကြောင်းထုတ်ပေးနေဖြင့်ပြည်နယ်အတွင်းအကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအချို့ထိန်းညှိနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ, ရေ, အစိုင်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်စွန့်ပစ်ပါမစ်များနှင့်လေကြောင်းရန်, ရေ, အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်, အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်နှင့်အဆိပ်တွေနဲ့သေချာလိုက်နာမှုအပြည့်အဝအကွာအဝေးလုပ်ဆောင် လေ, မြေ, နှင့်ရေဖို့စက်မှုလုပ်ငန်း '' သက်ရောက်မှု minimize နိုင်ရန်အတွက်သန့်ရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်း။ ကျွန်တော်တို့သည်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်အသေးစိတ်ကိုမှစေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်ကြထိရောက်စွာပညာရှင်များနှင့် nonprofessionals နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖန်တီးမှုပြဿနာ solver နေသောလျှောက်ထားရှာကြ၏။
တစ်ဦးအေဂျင်စီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဝါရှင်တန်၏ပတ်ဝန်းကျင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထိရောက်သောအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်တာဝန်ခံဖန်တီးမှုခေါင်းဆောင်မှုအားပေးမယ့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တွစ်တာ, Facebook, Instagram ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါတို့မကြာသေးမီပုံပြင်များအချို့ကိုမြင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂျင်စီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်မှာကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.ecy.wa.gov .
ဒေသခံအားထုတ်မှု ... ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားကလူ ... statewide သက်ရောက်မှု
အဆိုပါစွန့်ပစ်2အရင်းအမြစ်များ (W2R) အစီအစဉ်၏မစ်ရှင်ပမာဏနှင့်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ပြီးလျော့၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်2အဆငျ့မှာ Facility အင်ဂျင်နီယာချုပ်အနေအထား၏တံခါးသော့ကိုအလုပ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
မှတ်ပုံတင် Professional ကအင်ဂျင်နီယာချုပ်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်, တာဝန်ပေးအပ်အဖြစ်အဓိကစက်မှုအဆောက်အဦများအတွက်လေကောင်းလေထုတ်လွှတ်မှု, ရေဆိုး discharges, အစိုင်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိစ္စများနှင့်ဆက်စပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတာဝန်များကိုအပြည့်အဝ-range ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်:
လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ, ရေဆိုးကုသမှုစနစ်များ, အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ကုသမှုစနစ်များ, site ကိုသန့်ရှင်းရေးကုသမှုစနစ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ / လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဘို့အအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းများပြန်လည်သုံးသပ်။
အစီအစဉ်များ, ညစ်ညမ်းမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ, ပိတ်သိမ်း / Post-ပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်နှင့်အခြားလိုအပ်သောအစီရင်ခံစာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများစောင့်ကြည့်, အင်ဂျင်နီယာအစီရင်ခံစာများပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်။
တုံ့ပြန်ရန်နှင့်လေ, အစိုင်အခဲ / အန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်နှင့်အခြားအစီအစဉ်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ရေအရည်အသွေးကိုတိုင်ကြားမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
တာဝန်ပေးအဆောက်အဦများနှင့်ဂေဟဗေဒအတွင်းရှိအခြားအများပြည်သူအေဂျင်စီများနှင့်ကဏ္ဍများအကြားတစ်ဦးဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ် Acts ။
အစီအစဉ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်, စာရင်းစစ်များနှင့်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်လေထုအရည်အသွေး, ရေအရည်အသွေး, အန္တရာယ်ရှိတဲ့စွန့်ပစ်နှင့်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုသေချာစေရန်လေ့လာမှုများစောင့်ကြည့်။
လေ့လာဆန်းစစ်နှင့်စက်မှုအဆောက်အဦမှနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအများပြည်သူထံမှမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် RCWs, WACs, ပြည်တွင်းရေးမူဝါဒမြား, လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့လမ်းညွှန်မှုစာရွက်စာတမ်းများအနက်ကိုဘော်ပြ။ ဖြည့်အထိဤစုဆောင်းမှုပွင့်လင်းရှိနေပါဦးမည်။ ကနဦးစိစစ်ဇန်နဝါရီလ 16, 2017 ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကနဦးစိစစ်ဘို့စဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက်ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရှေ့မှာလျှောက်လွှာတင်သွင်းပါ။ အဆိုပါအေဂျင်စီရက်ချိန်းကနဦးစိစစ်နေ့စွဲပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းရေကူးကန်ကိုထပ်တိုးဖို့ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ် 1 သို့မဟုတ်2အဆင့်ဆင့်မှာအရည်အချင်းပြည့်မှီကြောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှင့် In-လေ့ကျင့်ရေးအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့အောက်ကအရည်အချင်းများအခန်းကိုဖတ်ရှုပေးပါ။
ဒီအနေအထားများအတွက်ရည်မှန်းချက်လူတန်းစားတစ်ရပ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်2(EE2) ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ 1 နှင့်2အဆင့်ဆင့်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသူကိုလျှောက်ထားစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဗိုလ်လုပွဲအတွက် EE1 အဆင့်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံလျှင်သူတို့အချိန်တစ်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း EE2 ဖြစ်လာမယ့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်သို့ထားရှိပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်2အဆင့်မှာ: Pay ကို Range 61 ($ 4644 - $ 6095) လစဉ်
အောက်ပါအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်သန့်ရှင်းရေး, အရပ်ဘက်, ဘူမိ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ, ဓာတု, စက်မှုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ကွင်းများထဲမှတစ်ဦးမာစတာဘွဲ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာ (1) နှစ်က။
အောက်ပါအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်သန့်ရှင်းရေး, အရပ်ဘက်, ဘူမိ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ, ဓာတု, စက်မှုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ကွင်းများထဲမှတစ်ဘွဲ့ဘွဲ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံနှစ်ဦးကို (2) နှစ်။
အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ် 1 အဆင့်မှာ: Pay ကို Range 55 ($ 4005 - $ 5253) လစဉ်
အဓိကကအောက်ပါအင်ဂျင်နီယာလယ်ကွင်းများထဲမှအတွက်လေ့လာမှု, သန့်ရှင်း, ရေအရင်းအမြစ်များကို, အရပ်ဘက်, ဘူမိ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ, ဓာတု, စက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်နှင့်အတူတစ်ဦးကမာစတာဘွဲ့
တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာချုပ်-In-သင်တန်းလက်မှတ်သို့မဟုတ်အောက်ပါအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်သန့်ရှင်းရေး, အရပ်ဘက်, ဘူမိ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ, ဓာတု, စက်မှုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ကွင်းများထဲမှတစ်ဦးကိုအဓိကလေ့လာမှုနဲ့ဘွဲ့ဘွဲ့။
မှတ်စု : လိုအပ်သောပညာရေးကိုအနည်းဆုံး 15 သုံးလပတ်ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်လေထုနှင့်ရေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး, စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနမူနာများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်သင်တန်းအလုပ် 10 စာသင်ခရက်ဒစ်များပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့် application တစ်ခုပူးတွဲမှုအဖြစ်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်ပေးပါ:
သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုရှင်းလင်းတစ်ဦးကကိုယ်ရေးရာဇဝင်။ ဒီအနေအထားလျှောက်ထားသည့်အခါလျှောက်ထားသူပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ပေးပါ။ သို့မဟုတ်, သင်ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် text field ထဲမှာသင်၏အထဲမှာကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏စာသား paste လိမ့်မည်။
အဆိုပါဖြည့်စွက်မေးခွန်းများကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့်လုံးဝဖြေကြားပေးပါ။ နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှသင်က disqualify ဖြစ်နိုင်သည် "ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး" အပါအဝင်မပြည့်စုံတုံ့ပြန်မှု။
ဂေဟဗေဒန်ထမ်းဦးစီးဌာန, ဝါရှင်တန်အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုအတွင်းလျှို့ဝှက်ဝန်ထမ်းအဖြစ်အမြဲတမ်းအဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. အေဂျင်စီ-ကျယ်ပြန့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သေချာစေပါပါ။2မေးခွန်းထုတ်ရန်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဂေဟဗေဒဦးစီးဌာနရွေးဖို့မေ့လျော့ခြင်းနှင့်မေးခွန်းတစ်ခုကို3အဘို့သင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ID နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်မထားပါနဲ့။ သင်သည်သင်၏အဆင့်အတန်းသေချာမသိကြသို့မဟုတ်သင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ID နံပါတ်မသိရပါဘူး, (360) 407-6186 မှာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်.
သငျသညျပုံနှိပ် format နဲ့၌ဤကြေညာချက်ကိုဖတ်ရှုနေတယ်ဆိုရင်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.careers.wa.gov အွန်လိုင်းစုဆောင်းမှု system ကိုဝင်ရောက်ဖို့။ "ဂျော့ဘ်ကိုရှာ" နှငျ့ "ဦးစီးဌာန" ရှာဖွေရေးစာရင်းကိုအောက်တွင်ဂေဟဗေဒ၏ Dept. ကို select ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ "ရှာရန် Apply ။ " ကိုနှိပ်ပါ
သင်ဤအလုပ်လျှောက်ထားအကူအညီလိုပါလျှင်, (360) 407-6186 သို့မဟုတ် e-mail, မှာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကိုခေါ်ပါ [အီးမေးလျ protected] ။ ဒီနံပါတ်ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်သင့်လျှောက်လွှာ၏ status-up, နောက်ကိုလိုက်ရန်ဤလိပ်စာအီးမေးလ်မပို့ကြဘူးပါ။ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်း၏အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏လျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးအဆင့်အတန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်အနေအထားနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောမေးခွန်းများရှိပါကမှာ Stephanie Ogle အီးမေးလ်ပို့ပါ: [အီးမေးလျ protected] ။ သင်၏လျှောက်လွှာများ၏အခြေအနေအကြောင်းမေးလျှောက် Stephanie ကိုဆက်သွယ်ကြဘူးပါ။
လျှောက်လွှာပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်း၏လုပ်ရပ်အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များပြည့်စုံခြင်းနှင့်သစ္စာဝါဒီကြောင်းကတိသစ္စာပြုစဉ်းစားသည်။ အဆိုပါပြည်နယ်ဤအချက်အလက်အတည်ပြုရန်နိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်လျှင်မည်သည့် untruthful သို့မဟုတ်အထင်အမြင်မှားစေအဖြေတွေကိုသင့် application သို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခံရ၏ငြင်းပယ်ခံရဘို့အကြောင်းမရှိဖြစ်ကြသည်။
ဒီအနေအထားဂေဟဗေဒဌာနများအတွက်ပြည်နယ်န်ထမ်းများ၏ဝါရှင်တန်အဖွဲ့ချုပ် (WFSE) ပြည်ထောင်စုညှိနှိုင်းယူနစ်များတွင်ပါဝင်သည်။ အားလုံးန်ထမ်းဖြစ်စေ, အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအခွအေနေသကဲ့သို့, WFSE နှင့်အတူစုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက် (CBA) ကပါလိမ့်မယ်ဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိ, အ CBA ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Non-အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်တစ်ဦးကိုယ်စားပြုမှုအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း, WFSE အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လစာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခွန်အခဖြစ်လာသို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် 30th သောနေ့ထက်ဒီ CBA ၏ထိရောက်သောနေ့စွဲသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်၏အစတွင်အောက်ပါ။
ဂေဟဗေဒ၏ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ညီမျှအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါဝင်သည်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, လူမျိုးရေး, တိုင်းရင်းသား, လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုဝိသေသလက္ခဏာမတူကွဲပြားမှုလေးစားတဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားကြသည်။ အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းနှင့်ကျား, မအထောက်အထားတွေကိုအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်, လူမျိုးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ, မသန်စွမ်း၏ပုဂ္ဂိုလ်များ, အသက် 40 နှစ်အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, စစ်ရေးအနေအထားကိုနှင့်အတူစစ်ပြန်သို့မဟုတ်လူများ, လူတွေလျှောက်ထားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ format နဲ့လျှောက်လွှာ / စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နေရာထိုင်ခင်းသို့မဟုတ်ဤအလုပ်ကြေငြာချက်လိုအပ်နေပုဂ္ဂိုလ်များ (360) 407-6186 ကိုခေါ်လိမ့်မည်။ ကြားနာ၏ဆွံ့အနားမကြားသို့မဟုတ်ခက်နေသောလျှောက်ထား 7-1-1 သို့မဟုတ် 1-800-833-6388 ခေါ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်ဝါရှင်တန် Relay Service ကိုခေါ်လိမ့်မည်။
ယခင်: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level)
နောက်တစ်ခု: ပြကွက်များ၏နောက်ကွယ်အတူတက် Sennheiser အသင်းများဒူဘိုင်းအတွက် Sennheiser အသံအကယ်ဒမီ Host မှ